လက်ကား Gold Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm) ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |ရိုးသားဖြူစင်သည်။
Extruded Sheets ကိုရှင်းလင်းပါ။
အနုလက်ရာ CNC ထွင်းထုဖြတ်တောက်ခြင်း။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် LED Inkjet ပုံနှိပ်စက် (အတိုကောက် Uv ပုံနှိပ်ခြင်း)
ရွှေရောင် Acrylic မှန်ချပ် (0.6mm-10mm)
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ac...
အပြာရောင် Translucent Acrylic Sh...
အနီရောင် Translucent Acrylic သူမ...
Acrylic Mirror Sheet ကို ရှင်းရန်...
ရွှေရောင် Acrylic မှန်ချပ် (...
Mirror Acrylic Sheet သည် မှန်ချပ်တစ်ခုအဖြစ် တစ်ဖက်တွင် ရောင်ပြန်ဟပ်ထားသော Acrylic Sheet အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်တွင် မီးခိုးရောင်ပန်းချီနောက်ခံနှင့် မျက်နှာပြင်ဘက်တွင် ခိုင်ခံ့သောအကာအကွယ် ပလတ်စတစ်ဖလင်ဖြင့်သာ ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သော မှန်တစ်ချပ်ဖြစ်သည်။
● ခိုင်မာသောမျက်နှာပြင် မာကျောမှု
● ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ပစ္စည်းကောင်း
● ထူးခြားသော ခိုင်ခံ့သော ပန်းချီနှင့် အပေါ်ယံပိုင်း
● အဆိပ်မရှိသော၊ eco friendly
၎င်းတို့၏အလွန်ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ကြောင့်ကျယ်ပြန့်သော applications များ
2. Display နှင့် point-of-sale
4. အလှဆင်ရန်အတွက် အတွင်းခန်းသုံးပစ္စည်းများ
7. ညကလပ်နှင့် အရက်ဆိုင်
8. အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးချမှုများ
၉။ ဘေးကင်းရေးတွင် acrylic ပလပ်စတစ်စာရွက်၏ ပေါ့ပါးပြီး အကွဲအပြဲခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
စံချိန်မီ အလုပ်ရုံသုံး စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဖြတ်၊ ဖောက်၊ ဖြတ်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက် Acrylic Mirror Sheet
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စိတ်တိုင်းကျ ကြေးမုံ အက်ခရီလစ်စာရွက် ထုတ်လုပ်သူ
ရွှေရောင်ဖြင့် အရောင်ခြယ်ထားသော Mirror Perspex သည် စတိုင်လ်ကို မြင့်တင်စေပြီး ကျက်သရေ၊ အလှနှင့် ကျက်သရေရှိမှုတို့ကို ဖန်တီးရန်အတွက် အိမ်အလှဆင်ရန်အတွက် အလွန်စတိုင်ကျသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။Perspex အမှတ်တံဆိပ်ပါ acrylic စာရွက်သည် ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် ပြင်ပစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကာအကွယ်ပေးသည့် 10 နှစ် အာမခံ ပေးထားသည်။အခြားကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပြောင်မြောက်သောပစ္စည်းများအပြင် ရွှေကြေးမုံ Perspex သည် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုတွင် သူကိုယ်တိုင်တင်ပြလျက်ရှိသည်။ပြပွဲနှင့် ပြပွဲများ၊ ဗိသုကာ ဒီဇိုင်း၊ အလှကုန်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များတွင် ပိုမိုသော အသုံးချပလီကေးရှင်းများကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ကုသိုလ်ကံ ရွှေရောင် Acrylic မှန်ချပ်
ပစ္စည်း 100% Virgin PMMA
အရွယ်အစား 1220*2440mm(4*8ပေ)၊ 1220*1830mm(4*6ပေ)၊ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
နမူနာ A4 အရွယ်အစား
ဖုံးကွယ်ထားသည်။ PE ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် လက်မှုစက္ကူ
လျှောက်လွှာ ဆောက်လုပ်ရေး အလှဆင် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားများ။
တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ မီးခုံများနှင့် ကော်ဖတ်အမိုးအကာများ
စက်အဖုံးများ၊ လျှပ်စစ်အကြေးခွံများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းများ
ကြည်လင်ပြတ်သားသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပျော့ပျောင်းသောအလင်းရောင်နှင့် ကြည်လင်သောအမြင်ဖြင့်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ကွဲအက်မှုကို သက်သေပြသည်။
အဆိပ်မရှိ၊ အန္တရာယ်ကင်းပြီး အရသာမရှိသော ပစ္စည်းအသစ်များကို အသုံးပြုခြင်း။
1. Acrylic board ကို မည်ကဲ့သို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းနည်း။
A: သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် ဆေးကြောပြီး နူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့် ခြောက်အောင်ထားပါ။
2. ငါလိုချင်တဲ့ အရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်မလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် အရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ မှန်ပြောင်းလုပ်ခြင်း၊ အရောင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အခြားသော တစ်ခုတည်းသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
3. မင်းရဲ့ acrylic sheet က ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။
အဖြေ- ကြီးမားသောပန်းကန်၏ သမားရိုးကျအရွယ်အစား- 1220*1830 သို့မဟုတ် 1220*2440mm၊ အသုံးများသောအထူ 0.8-10mm။
ယခင်- Rose Gold Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
နောက်တစ်ခု: ကြည်လင်သော Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
ရွှေရောင် Acrylic ကြေးမုံ
အစိမ်းရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
ကြည်လင်သော Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
စိတ်ကြိုက်ရောင်စုံကြေးမုံ အက်ခရီလစ်စာရွက် 0.6mm-10mm...
အနီရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
မီးခိုးရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
၎င်းတို့၏ ကွဲပြားခြားနားသော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဘဝတွင် အသုံးပြုခဲ့သော acrylic plates ပုံစံများစွာရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးပြည့်စုံသော acrylic ပြားများထုတ်လုပ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။